Adeegga Nakhshadeynta Mareegta
DHEXE-MAN - HAY'ADA NAQASHAYNTA SHARCIGA AH EE UX/UI HEERKA SHURUUDAHA
Dejinta mareegaha tayada leh ee Wakaalada Mid-Man. Abuuritaanka iyo horumarinta goobaha keenaya qiimaha iyo waxtarka waa yoolalka ay kooxda Mid-Man adiga kuu hiigsanayso. Mid-Man ayaa kaa caawin doona inaad xalliso dhibaatada gaarista macaamiisha adoo adeegsanaya adeegga, naqshadeynta website-ka, HAL-abuurka - OPTIMIZATION - SEO STANDARD - XIRFAD IYO FIICAN.
MIYAAD GALAYSA INAAD LUMISO?
Xilligii tiknoolajiyada dhijitaalka ah ee 4.0, oo ay weheliso horumarka degdega ah ee internetka, isbeddelka ganacsiga internetka ama iibinta internetka ayaa keenay waxtarka dhaqaale ee khadadka ganacsiga badan ee Adduunka. Adiguna see tahay? Miyaad naqshadaysaa boggaga internetka oo ma ka qaybqaadataa suuqa ganacsiga internetka?
Marka loo eego warbixinta e-commerce ee Koonfur-bari Aasiya ee 2019 ee Google, Temasek, iyo Brain & Company, celceliska heerka kobaca muddada oo dhan 2015-2025 ee ganacsiga e-commerce waa 29%. Iyada oo heerka kobaca degdega ah ee noocaas ah, fursadda aad kaga qayb qaadan karto suuqa ganacsiga ee khadka tooska ah waa mid furan.
Sida laga soo xigtay Ururka E-commerce (VECOM), laga bilaabo 2019, qiyaastii 42% ganacsiyadu waxay leeyihiin degel, kuwaas oo ilaa 37% ay ka heleen amaro mareegaha. Kaliya maaha macaamiisha tafaariiqda, macaamiisha ganacsiyada ka dalbanaya mareegaha waxay ku xisaabtamayaan ilaa 44%. Tani waxay tusinaysaa in isticmaalayaashu ay si tartiib tartiib ah ugu jeestaan ​​inay wax ka iibsadaan mareegaha halkii ay ka iibsan lahaayeen alaab dhaqameed.
Iyada oo ku saleysan isbeddelka habdhaqanka wax iibsiga ee muddada COVID, ganacsiyada leh mareegaha internetka ayaa hadda faa'iido u leh inay ku tartamaan suuqa internetka. Waxaa laga yaabaa inaad ka walwalsan tahay inaad la tartanto horu-yaasha, laakiin sidoo kale waa la soo dhaweynayaa. Sababtoo ah iyadoo lagu salaynayo waxa tartamayaashaadu sameeyeen, tani waxay kuu tahay fursad aad ku barato, khibrad, ikhtiraac iyo abuurto degelkaaga.
Marka loo eego xogta, laga bilaabo 2019, ilaa 55% ganacsiyadu waxay leeyihiin wax soo saar deggan, iyo 26% waxay tixgeliyaan shabakadda aaladda ugu caawinta badan iibka alaabta. Sidaa darteed, waxa ugu horreeya oo lagama maarmaanka ah hadda waa in la naqshadeeyo degel adiga oo keliya. Mid-Man ayaa ku raaci doona, abuuri doona nashqad shabakad xirfad leh, oo kaa caawin doonta hawlahaaga ganacsi in la horumariyo oo la horumariyo.
MID-MAN waxay ku faantaa inay tahay unug naqshadaynta mareegta oo xirfad leh oo leh sanado badan oo khibrad edbin ah oo suuqa suuq-geynta ah. Waanu ku wehelin doonaa oo ku taageeri doonnaa samaynta shabakad wax-ku-ool ah, TAYO, HAYD, IYO XIRFAD LEH. Ku qanacsanaantaada waa mas'uuliyadda dhammaan kooxda naqshadeynta shabakada ee MID-MAN.
Goobtu waa goobta dagaalka. Websaydhku waa saldhigga, arsenal, iyo meesha macluumaadkaaga. Haddii aanad hore u lahayn saldhig mareegaha tayada leh, maanta billow dhiskeeda. Xilligan isbeddelka dhijitaalka ah ee adag, lahaanshaha mareegaha kuma filna. Lahaanshaha mareegaha iyo, u shaqaynta si wax ku ool ah, caawinta hagaajinta dakhliga waa yoolka aad u baahan tahay inaad hiigsato. Ka sokow naqshadeynta bogga soo jiidashada leh, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato khibradaha isticmaalaha. Sababtoo ah naqshadeynta shabakada oo leh habka wax iibsiga fudud oo ku habboon iyo aqoonta ayaa lagama maarmaan kuu ah inaad si fudud u "xirto amarrada" macaamiisha, MID-MAN AGENCY oo leh nidaamka deegaanka ee wadarta xalalka suuq-geynta ayaa noqon doona buundada kaa caawinaysa inaad u dhawaato macaamiisha aad beegsanayso suuqa internetka.
Iyada oo leh xoogga naqshadeynta shabakadda, is-dhexgalka caadiga ah, iyo waayo-aragnimada isticmaale, MID-MAN waxay ku faantaa inay hormuud u tahay unugga naqshadeynta mareegta TAYO IYO PRESTIGE.
MAXAY TAHAY IN AAD U NAQAYSO SHABEEB?
Websaydhku waa kanaal isgaarsiin iyo aalad ganacsi oo hormuud ah maanta. Websaydhku waa sida wejiga adiga, ganacsigaaga, ama ururkaaga ku metelaya goobta tignoolajiyada dhijitaalka ah ee 4.0 IOT.
Muhiimad weyn, intii lagu jiray xilligii ugu sarreeyay ee faafitaanka Covid-19, dhaqaalaha adduunka oo dhan aad ayuu u saameeyay. Warshado badan ayaa si toos ah u saameeyay, sida soo dejinta-dhoofinta, dalxiiska, iwm., laakiin dakhliga ka soo gala wax iibsiga online ee mareegaha. Mareegaha ganacsi ee badan iyo bogag-ganacsiga e-commerce ee B2C ayaa wali kor u kacay 20-30%, xitaa waxay si aad ah ugu kordheen alaabada muhiimka ah iyo qalabka caafimaadka. Tani waxay muujinaysaa in isbeddelka habdhaqanka wax iibsiga ee isticmaalayaashu uu si tartiib tartiib ah ugu wareegayo suuqa internetka.
Isbeddelka dhijitaalka ah iyo doorka muhiimka ah ee mareegaha maanta, ma jirto sabab aad uga labalabayso inaad naqshadayso degel oo aad ku xayeysiiso astaantaada suuqa internetka.
Naqshadaynta shabakada heerka SEO
Halbeegga naqshadaynta shabakada xirfadlayaasha SEO ayaa kuu sahlaysa inaad sare u qaaddo oo aad geliso ganacsigaaga alaabada iyo adeegyada raadinta TOP Google. Markay tahay MID-MAN, degelka waxaa lagu nashqadeeyay halbeegyada SEO laga soo bilaabo wakhtiga dhismaha degelka, lagana hagaajiyay koodhka isha ilaa sifaadka, OnPage iyo OffPage, nakhshad jawaab celin leh, oo lagu sugay borotokoolka SSL-saaxiibtinimo search engine. ..
Aasaaska Naqshadeynta Shabakadda ee HAY'ADDA DHEXE
Si ka duwan qaybaha kale ee nashqadeynta mareegaha ee suuqa maanta, MID-MAN kuma koobna luuqad gaar ah ama madal naqshadeynta. Kooxda injineernimada ee MID-MAN oo leh awood iskutallaab ah si ay u qaabeeyaan WordPress, Laravel, React, React Native, Node JS… ayaa buuxin doona dhammaan shuruudaha qaabaynta degelkaaga.
WAA MAXAY MAXAY MAXAY MAXAMED AAD U DOORTAY NAQOSHADA MARKACYO BADAN?
Naqshadaynta mareegaha MACLUUMAADKA BADAN
Naqshadeynta Mareegta GUDAHA
Alaabooyinka waxaa loo tixgeliyaa warshad farshaxan oo la dabaqay. Sidaa darteed, shabakada naqshadeynta gudaha waxay u baahan tahay inay la kulanto bilicda, soo jiidashada, oo muujiso qaabka astaanta ganacsigaaga. Lahaanshaha mareegaha gudaha waxay ka caawisaa ganacsigaaga inuu sare u qaado astaantaada oo uu gaadho fayl wayn oo macaamiisha suurtagalka ah ee suuqa internetka.
FIKIRKA ILAA FULINTA
TALLAABOOYINKA LOO SAMEYNAYO SHABEEB XIRFAD LEH EE MID-MAN
MID-MAN, oo leh hal-ku-dhegga shaqada udub dhexaad u ah macaamiisha, had iyo jeer waxay higsanaysaa xalalka taageerada macaamiisha ee hawlaha naqshadaynta shabakadda. Waxaan haynaa hanaan shaqo oo toos ah si aan kuugu adeegno si xirfad leh.
Shaqaalaha MID-MAN ee khibradda leh waxay la kulmaan macaamiisha, dhagaystaan ​​fikradaha naqshadeynta, waxayna ka hadlaan sifooyinka aad ka rabto naqshadeynta shabakadda. Ka dib markaad la tashato xalalka iyo sifooyinka ku habboon ujeedooyinkaaga iyo baahiyahaaga, waxaan qorsheyneynaa naqshadeynta.
Saxeexa iyo iskaashiga
Si loo xaqiijiyo xuquuqdaada, waxaanu si wadajir ah u samaynay dukumeenti sharci ah. Gacan-qaadka yar wuxuu muujinayaa ruux weyn. MID-MAN waxay noqon doontaa wehelkaaga, kaa caawin doona inaad dhisto xalka naqshadaynta mareegaha saxda ah iyo sare u qaadida astaantaada suuqa.
Iyada oo ku saleysan fikradahaaga, kooxda nashqadaynta MID-MAN ee leh maskax hal abuur leh oo jawaab celin leh waxay abuuri doonaan qurux, soo jiidasho leh, iyo naqshado shabakadeed UI/UX-standard demo. Ka dib markaad dib u eegto demo, kooxda naqshadeynta ayaa kuu samayn doona tafatir si aad u dhamaystirto naqshadda faahfaahsan.
Laga soo bilaabo naqshadeynta aan haysano iyo waayo-aragnimada la ururiyay sannado badan oo shaqo ah, kooxda barnaamij-fududyadu waxay qorsheyn doonaan barnaamijka caadiga ah ee UX (waayo-aragnimada isticmaalaha) waxayna hirgelin doonaan barnaamijyada shabakada si loo hubiyo sifooyin buuxa oo qiimo leh oo ku habboon boggaaga.
Tijaabi oo wax ka beddel
Marxaladdan, nashqadaynta degelkaaga ayaa ku dhow inay dhammaato. Si kastaba ha ahaatee, si loo abuuro badeecada ugu fiican oo loo hubiyo in degelku si habsami leh oo hufan u shaqeeyo, kooxda farsamada ee MID-MAN ayaa hubin doonta oo cabbiri doonta ka hor intaanay dhab ahaantii shaqayn.
Xilwareejintu waa masuuliyad saaran dhamaan kooxda MID-MAN. Kooxda MID-MAN ayaa ku hagi doona maamulayaal shabakadeed oo heegan ah oo fikir leh. Inkastoo mashruuca la dhameeyay, kooxda MID-MAN waxay mar walba diyaar u tahay inay kaa taageerto ka shaqaynta iyo maamulka website-ka.
MAXAAD U DOORANAYSAA ADEEGYADA NAQLIGA SHABSIGA AH EE LAGA BAAHAN YAHAY EE MID-MAN?
MID-MAN AGENCY waxay leedahay koox shaqaale khibrad u leh naqshadaynta mareegaha warshado badan. Luuqadaha naqshadaynta ee kala duwan, waxaanu buuxinay dhamaan shuruudahaaga. Nala soo xidhiidh si aad u hesho naqshad shabakadeed xirfad leh oo waxtar leh.
Websaydh si loo baro shakhsiyaadka, dukaamada, iyo ganacsiyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa yaryar
Shabakadda iibka guud
Naqshad interface gaar ah marka la codsado: 1 interface interface
Tafatirka maqaarka bilaashka ah: ilaa 3 jeer
Barnaamij-samaynta aasaasiga ah ee baahida
Saamaynta shabakada: aasaasiga ah
Platform Programming: Ikhtiyaar
Naqshadaynta caadiga ah ee UI/UX - Interface User iyo Khibradda Isticmaalaha
Heerarka Jawaabta – la jaanqaadi kara daalacashada iyo aaladaha badan sida PC-yada, Laptop-yada, tablet-yada, iyo mobilada.
Hagaajinta xawaaraha bogga
Barnaamijyada caadiga ah ee SEO
Nabadgelyada SSL ee bilaashka ah sanadka ugu horeeya
Ku wareejinta koodhka isha (koodka isha)
Dammaanadda nolosha iyo dayactirka
24 / 7 taageero farsamo
Naqshadeynta bogga ugu sarreeya
Websaydh si loo soo bandhigo dukaamada, ganacsiyada waaweyn
Shabakadda ganacsiga khadka tooska ah, wararka, adeegyada, maaliyadda, tignoolajiyada gaarka ah, garaafyada sare…
Naqshad interface gaar ah oo loo baahan yahay: tiro aan xadidnayn oo harag ah
Dhaqdhaqaaqa maqaarka ee bilaashka ah: Ilaa 5 jeer
Barnaamijyo horumarsan oo shaqaynaya oo baahida loo qabo
Saamaynta shabakada: Sare
Isku xirka kanaalka badan ee isku dhafan ee kooxda saddexaad
La-talinta Xalka Suuqgeynta Dhameystiran ee Bilaashka ah
Qiimo dhimista khidmadaha adeegga Suuqgeynta
Heerarka Jawaabta - la jaanqaadi kara daalacashada iyo aaladaha badan sida PC, laptops, tablets, mobil, dhaqaaqa,…
WAA MAXAY MAXAY NAQAYNTA MARABKA MASKAXDA MIKO TECH U LEEYIHIIN QIIMO BADAN?
Naqshadaynta mareegaha oo la hagaajiyay iyadoo loo eegayo shuruudaha asaasiga ah ee diiradda saaraya macaamiishaada waa yoolka ay MID-MAN hiigsanayso. Waxaan fahamsanahay in warshad kasta oo cabbir kasta ah, ay jirto baahi loo qabo naqshadeynta mareegaha xirfadleyda iyo waxtarka leh. Sidaa darteed, adeegyadayada nashqadeynta shabakadda waxay ku qanciyaan dhammaan macaamiisha qiimo macquul ah.
KA JAWAABAYNTA SU'AALAHA MARKII LA NAQAYNAYAY WEBSITTER EE MID-MAN
WAXAAD WAYDIINAYSAA - JAWAAB DHEXE
Ma u baahan tahay inaad wax badan ka ogaato adeegyada naqshadaynta shabakada ee MID-MAN? Hoos ka daawo jawaabaha!
Maxaad ka fahantay Naqshadda Mareegta?
Naqshadaynta mareegaha ama nakhshadeynta degelka waa si fudud shaqada loo abuurayo mareegaha shaqsi, shirkad, ganacsi, ama urur. Waxaa jira laba hab oo waaweyn oo loogu talagalay naqshadeynta Shabakadda: naqshadaynta mareegaha joogtada ah iyo naqshadaynta shabakadda firfircoon. Faahfaahin dheeraad ah, arag maqaalka Waa maxay naqshadeynta degelka?
Waa maxay naqshadeynta webka caadiga ah ee SEO?
Naqshadaynta mareegaha caadiga ah ee SEO waa shabakad leh qaabayn iyo astaamo u oggolaanaya matoorada raadinta sida Google, Yahoo, iyo Bing… inay gurguurtaan oo ay si fudud u fahmaan mareegaha oo dhan. Eeg maqaalka faahfaahsan oo ka badan ereyada 3000 ee ku saabsan naqshadaynta bogga caadiga ah ee SEO
Waa maxay naqshadeynta shabakada ka jawaaba?
Naqshad shabakadeed oo jawaab celin ah ayaa si fudud u ah hab lagu dejiyo oo loo dhiso shabakado ku habboon oo lagu soo bandhigo dhammaan noocyada aaladaha elektiroonigga ah, sida taleefannada, tablet-yada, laptop-yada, PC-yada, iwm..
Intee in le'eg ayay ku kacaysaa naqshadaynta degelkan?
Iyadoo ku xiran shuruudaha iyo sifooyinka degel kasta, cutubka naqshadeynta wuxuu bixiyaa kharashyo naqshadeyn oo kala duwan.
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa in la dhammaystiro naqshadaynta mareegta?
Wakhtiga la dhamaystirayo mareegaha waxa ay ku xidhnaan doontaa arimo badan sida goobta uu website-ku hiigsanaayo, macaamiisha; qaabka beddelka ee la-hawlgalayaasha, interface fudud ama adag; shaqeynta mareegaha, iyo astaamo kale. Waqtiga lagu nashqadeeyo mareegaha MID-MAN badanaa waa 3-4 usbuuc, marka loo eego isweydaarsiga la-hawlgalayaasha.
Naqshadeeyuhu ma leeyahay qandaraas cad?
MID-MAN waxaa ka go'an in ay yeelato qandaraas dhan si loo ilaaliyo danaha la-hawlgalayaasha, hubinta daacadnimada, daah-furnaanta, iyo kalsoonida marka la wada shaqeynayo.
Iyada oo leh dhammaan waayo-aragnimada, dadaalka iyo xirfad-yaqaannimada, Mid-Man ayaa si kalsooni leh u siinaya ganacsiyada xalka ugu fiican si loo sameeyo deisgn deisgn website xirfad leh.
TNHH TIẾP THYou VÀ DỊCHA VỤ MID-MAN
Maalinta ugu dambaysa: 05/03/2021 samee Sở Kế Hoạch iyo Đầu Tư TP Hà Nội
Khadka Taleefanka 1: +84 90 3401508
Khadka Taleefanka 2: +1 (484) 414-5687
Shabakadda Trang: https://mid-man.com/
© 2021 Mid-Man - Xalka Naqshadeynta Mareegta La Aaminsanyahay ee Ganacsiga onlaynka ah
Liiska wada sheekeysiga
Fadlan door sheeko si aad u bilowdo fariimaha